China Stainless ngentambo mveliso kunye nabenzi | Bangyi
Intambo yocingo lwentsimbi engenacici: ngentambo ezininzi okanye ezininzi zentambo entle ezijijelwe kwintambo eguqukayo, intambo yocingo yenziwa ngocingo lwensimbi olunamaleko amaninzi, olugqwethekileyo lwangumtya, kwaye ke ingumbindi njengeziko, ngenani elithile lemicu ejijekileyo intambo yokujikeleza.
Intambo yocingo lwentsimbi engenasici isebenzisa umgangatho ophezulu we-AISI304, i-AISI316 njengezinto ezingenanto ezenziwe ngentsimbi. It has nokumelana ezibalaseleyo umhlwa, ukumelana lobushushu eliphezulu kunye nokumelana eliphantsi lobushushu. Isetyenziswa ngokubanzi kushishino petrochemical, eyama, imoto, ukuloba, umhombiso wokwakha kunye namanye amashishini. Emva kokucoca i-electrolytic, intambo yocingo lwentsimbi engenasici iyaqaqamba kwaye uphawu lokumelana nomhlwa luyonyuswa kakhulu.
Intambo yocingo lwentsimbi engenazingcingo yamkela imigca yemveliso ezenzekelayo. Inkqubo yemveliso iquka ukuzoba ngocingo, ukuxinga kunye nokuvala. Umzobo wocingo kukuzoba intonga yentsimbi eshinyeneyo yenze ucingo olucekeceke. Ukuxinana kukudibanisa intambo ibe yimicu, kwaye ukuvala kukuphinda wenze imisonto ibe yintambo. Emva kokuba ezi nkqubo zigqityiweyo, ziya kuvavanywa umgangatho, zipakishwe, kwaye ekugqibeleni zibe yimveliso egqityiweyo.
Intambo yocingo lwentsimbi engenasici isebenzisa umgangatho ophezulu we-AISI304, i-AISI316 insimbi engenasici njengezinto ezingafunekiyo. Isiqwenga secingo esijikelezayo esenziwe ngeengcingo zentsimbi kunye neepropathi zoomatshini kunye nemilinganiselo yejiyometri ezihlangabezana neemfuno. Intambo yocingo lwentsimbi yintambo ejijekileyo yaba yimicu ukusuka kulwahlulo oluninzi lwentsimbi, emva koko inani elithile lemicu lijijelwe ukuba lijikeleze ngombindi njengeziko. Kwizinto zokuphatha oomatshini, isetyenziselwa ukuphakamisa, ukubamba, ukubamba kunye nokuthwala. Intambo yocingo lwentsimbi inamandla aphezulu, ubunzima bokukhanya, umsebenzi ozinzileyo, akukho lula ukuba wophulwe ngequbuliso, kunye nomsebenzi onokuthenjwa. Intambo yocingo lwentsimbi engenazingcingo igudile, ipolishiwe kakhulu, akukho burr, ukuthamba okuhle, ubushushu kunye nokumelana nokubanda, i-asidi enganyangekiyo, ukumelana nokulungela umhlwa (Kuyala ukuxhamla kunye nokubola ngeekhemikhali ezininzi, kwaye kuyamelana nokubola kwamanzi anetyuwa, Kulungele uLwandle / Indawo enamanzi etyuwa), ukukhathala okuphezulu, kunye nokukhululeka ekuqhekekeni kweLateral / longitudinal, imingxunya kunye namanqaku njl.
Ngenxa ye-316 intsimbi yentsimbi engenacingo inamandla okuxhathisa umhlwa, isetyenziswa ngokubanzi, Nangona kunjalo, ixabiso lentambo yentsimbi engama-304 ayibizi kakhulu, Xa ukhetha intambo yentsimbi engenacingo, 304 yaba lukhetho lokuqala, intambo yentsimbi engenacingo inokucocwa kunye nokuphathwa kobushushu ukwenza umphezulu wentambo yocingo uqaqambe kwaye ucoceke, ukonyusa kakhulu amandla kunye nokumelana kwentambo yentambo.
Intambo yocingo engenazingcingo ebonakaliswe ngomgangatho ophezulu wobuso, ukuqaqamba okumgangatho ophezulu, ukunganyaniseki okunamandla, amandla aphezulu okuqina kunye nokudinwa. ukumelana nobushushu obuphezulu, amandla aphezulu okuqhekeza, ubomi obude benkonzo, ukuhlala ixesha elide, kunye nezinye izinto ezininzi zeshishini, zinokusetyenziselwa ukuhambisa umthwalo omde, ukuphakamisa, ukubamba, ukungavani kunye nokuzala. Ubunzima bokukhanya, Inamandla aphezulu okuqina, ukudinwa kunye nefuthe lokuqina, ukusetyenziswa kukhuselekile kwaye kuthembekile, kulula ukuqhuba kunye nokuhambisa. Ingasetyenziselwa ukukhwela, ukuphakamisa, ukutsala, ukuthwala kunye nokujija. Isetyenziswe kwipetroleum, kumzi mveliso weekhemikhali, iilifti, izixhobo zokunyusa, ezemigodi, iimoto, ukuloba elwandle, iibhlorho, imoto, iinqwelomoya, ukurhola, ishishini lokukhanya kwehardware kunye namanye amashishini.
I-GB / T8918-3006
Ubunzima bokuphula umthwalo
Egqithileyo Intambo yePVC yentsimbi yentsimbi
Okulandelayo: Intambo ye-Stainless Wire 2
Intambo yocingo ye-304 engenazingcingo
Camera Camera Intambo
Intambo yocingo lwentsimbi engenazingcingo
Intambo yocingo yePvc engenazingcingo
DB camera intambo yentsimbi
Intambo yePVC yentsimbi yentsimbi
Camera Camera Intambo, Intambo yecingo ye-Electro kwalenza intsimbi, Intambo yocingo yePvc engenazingcingo, PVC Camera Isefu Steel Intambo, China Ukwenziwa Isefu Wire Intambo, Intambo yocingo lwentsimbi ngesinyithi,